हामी चाहन्छौ फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » हामी चाहन्छौ फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् (अन्तरवार्ता)
हामी चाहन्छौ फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् (अन्तरवार्ता)
सप्तरी २ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव जित्नु भएका उपेन्द्र यादव अहिले मतदातालाई बधाई दिनमा व्यस्त हुनुहुन्छ । मोरगं र सुनसरी छाडेर सप्तरीमा चुनाव लड्दा आलोचित हुनुभएका उपेन्द्र यादवको जन्मघर सप्तरी नै हो । उहाँ भन्नुहुन्छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मेरो क्षेत्र हो । जनताले मलाई जहाँ बोलाउँछ त्यहाँबाट चुनाव लड्छु, जहाँ मेरो आवश्यकता पर्छ त्यहाँ जान्छु ।’ प्रदेश सरकार गठन, मुख्य मन्त्री चयन, सविधान संशोधन र अगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा सप्तरीमा मतदातासँग व्यस्त रहनुभएका उपेन्द्र यादवसँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
चुनावमा घरदैलो गर्दा मतदातासँग तपाईले मधेश सरकार बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ, अब त्यो प्रतिवद्धता कहिल्यै पूरा होला त ?
–प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएर मत परिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकको मतगणना कार्य जारी छ । सबैको मत परिणाम आइसकेपछि त्यो प्रकृया शुरु हुन्छ ।
प्रदेशसभामा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको सीटले मधेश सरकार सम्भव छ कि छैन ?
–हाम्रो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालले प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ल्याएको सीटले सरकार बनाउन सकिन्छ । तर सरकार निर्माण गर्नका लागि समानुपातिकबाट आउने सीटलाई पनि जोड्नु पर्छ । मलाई लाग्छ समानुपातिकबाट आउने सीट सँख्याले हामी दुईटा दल मिलाएर मधेश सरकार बनाउँन सक्छौ । जुन प्रतिवद्धता हामी मतदाता समक्ष राखेका थियौं । मतदातालाई हामीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार म्याण्डेट पनि पाएका छौ । मधेश सरकार बनाउने हैसियता हामीलाई मधेशी जनताले प्रदान गरेको छ । समानुपातिकको मत परिणाम आउने वित्तिकै मधेश सरकार गठनको प्रकृयामा हामी जान्छौ ।
दुई नम्बर प्रदेशमा दुई दलको संयुक्त सरकार बन्ने देखियो, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
–मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने त्यसको विषयमा अहिले कुनै छलफल नै भएको छैन । र, छलफलका बेला पनि भएको छैन ।
एउटा कुनै माइण्ड मेकप गर्नुभएको होला नि ?
–सीटको हिसाबले हाम्रै दलबाट कोही मुख्य मन्त्री बन्नुहुन्छ । यद्यपी यसको बारेमा पनि छलफल गर्न बाँकी छ । संयुक्त सरकार निर्माण हुने भएका हुनाले दुई दलको बीचमा यस विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । त्यो अहिले भएको छैन । सबै परिणाम आइसकेपछि छलफल शुरु हुन्छ होला ।
लगभग तपाईकै दलबाट मुख्य मन्त्री पाउने अवस्था देखियो कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री ?
–व्यक्तिको बारेमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । चुनावमा सबै व्यस्त भएका हुनाले त्यसको बारेमा कसैसँग सल्लाह समेत गर्न पाएको छैन । जनतासँगको भेटघाट, विजय जुलुस लगायतका कार्य सकिएपछि काठमाडौ गएर यस विषयमा छलफल हुन्छ । पार्टीभित्रकै कुनै साथी बन्नुहुन्छ मुख्य मन्त्री ।
खासगरि दुईजनाको नाम तपाईको पार्टीबाट विजय यादव र लालबाबु राउतको बारेमा निकै चर्चा सुनिएको छ के उहाँ दुई जनामध्येबाट कोही एकजना बन्नुहुन्छ त ?
–मैले त्यस्तो चर्चा सुनेको छैन । उहाँहरु लगायत दुई नम्बर प्रदेशमा २० जना जित्नु भएको छ । सबैजना आआफ्नो ठाउँमा योग्य हुनुहुन्छ । यिनैमध्ये कोही एकजना बन्नुहुन्छ ।
मुख्य मन्त्रीका उम्मेदवार छान्नका लागि पार्टीबाट कुनै मापदण्ड वा केही त्यस्तो बनाउनु भएको छ कि ?
–अहिले त्यस्तो केही बनेको छैन । यताबाट फुर्सद भएपछि काठमाडौ गएर मापदण्ड बनाउनु पर्छ कि के बनाउनु पर्छ पार्टीमा सल्लाह गरेर मात्र हुन्छ ।
तपाई त आफ्ना पार्टीका २० जनालाई नै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ यदि २० जनामध्ये कसैलाई चुन्न तपाईलाई अधिकार दियो भने सबै कुरा मिल्ने गरि कसलाई चुन्नुहुन्छ ?
–मैले अघि नै भने कि आआफ्नो ठाउँमा सबैजना योग्य हुनुहुन्छ । कोही कसैभन्दा कम छैन । यद्यपी तीमध्ये नै एकजना चयन गर्नुपर्छ । त्यो पार्टीको सल्लाहबाट नै हुन्छ । एउटा प्रदेशको मुख्य मन्त्री चयन गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसमा सावधानी अपनाउनै पर्छ । दुई नम्बर प्रदेशका लागि हरेक दृष्टिकोणले को राम्रो हुन्छ त्यसलाई सर्वसम्मतिले पठाउँछौ । अहिले नै केही भन्ने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नहुँदासम्म प्रदेशको मुख्य मन्त्री बन्ने तपाईको पनि निकै चर्चा थियो । तपाई आफै मुख्य मन्त्रीका लागि किन तयार हुनुभएन त ?
–म आफै आउँदा पनि हुन्थ्यो । तर, पार्टीमा अरु साथीहरु पनि त्यस योग्य हुनुहुन्छ । अवसर सबैले पाउनुपर्छ । केही गर्ने मौका सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ग्रासरुटमा जसले काम गरेका छन् । आन्दोलन गरेका छन् । केही गर्ने जोश जागर लिएर बसेका छन् । उहाँहरुले पनि अवसर पाउनु पर्छ भनेर मैले छाडेको हुँ । अर्को कुरा सविधान संशोधनलगायतका मधेशका लागि थुप्रै कार्यहरु गर्न बाँकी छ । केन्द्रमा पनि संघर्षका ठूलै आवश्यकता छ । मधेशमाथि केन्द्रबाट नै विभेद भइरहेको छ । ती विभेदहरुलाई भत्काउन आवश्यक छ । केन्द्रीय राज्यसत्ता जो मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएकाहरुमाथि सदियौंदेखि विभेद गर्दै आएको छ । त्यहाँ लड्नका लागि त्यस्तै शक्ति चाहिन्छ ।
चुनावको समय सविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा आगाडि ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
–हो, हाम्रो मुख्य एजेण्डा नै सविधान संशोधन हो । सविधान संशोधन नभएसम्म मधेशको मुक्ति सम्भव छैन । मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, शिल्पीहरु अधिकारबाट बन्चित रहिरहनेछ । देशमा आएको परिवर्तनलाई उनीहरुले महसुस गर्न सकिने छैन । परिवर्तनका लागि जसले लडे, बलिदानी दिए त्यो नै परिवर्तनको महसुस गर्दैनन् भने त्यो सविधान के कामको । त्यसले सविधान संशोधनलाई नै हामी प्राथमिकतामा राखेका छौ । मतदातासँग गरेको प्रतिवद्धता हामीले पूरा गर्छौ ।
वामगठबन्धन ठूलो शक्ति भएर आएको छ, त्यसमा एमाले पनि रहेको छ जो सविधान संशोधनको विपक्षमा थियो यस अवस्थामा त्यो गठबन्धनसँग कसरी संशोधन गराउन सकिन्छ ?
–सविधान संशोधन हुनुपर्छ भनि माओवादी केन्द्र र एमालेले पनि स्वीकार गरेको छ । माओवादी केन्द्रसँग तीन बुँदे सम्झौता नै भएको थियो हाम्रो । सविधान संशोधनको आवश्यकता वामगठबन्धनले पनि स्वीकार गरेको छ त्यसैले मलाई लाग्छ कि सविधान संशोधन हुन्छ । चुनावको समयमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि मतदाता समक्ष सविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । मतदाताप्रति यदि इमान्दार छ भने त्यो प्रतिवद्धता ती दलले पनि गर्नुपर्छ ।
तपाईलाई के लाग्छ, ती दलहरु सविधान संशोधनका लागि तयार होला त ?
–विगतका क्रियाकलाप हेर्दा त उनीहरुले सजिलो गर्ला जस्तो लाग्दैन तर मधेशी, आदिवासी, जनजातिहरुको संघर्ष र आन्दोलनको अगाडि उनीहरुको केही चल्दैन । बाध्य भएर सविधान संशोधन गर्नैपर्छ । उनीहरुसँग विकल्प छैन ।
सविधान संशोधनका लागि फेरि आन्दोलनै गर्नुपर्छ त ?
–हामी चाहन्छौ फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् । शान्तिपूर्ण तरिकाले नै समान अधिकारका लागि सबैलाई स्वीकार हुनेगरे सविधान संशोधन गरोस् । आन्दोलन गर्न हामीलाई रहर छैन । सविधान संशोधन गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउनुपर्छ । देशलाई सधै अनिर्णयको बन्दकी बनाएर यसरी राख्न मिल्दैन । जबसम्म जनताले सविधानलाई अपनत्व महसुस गर्दैनन् तबसम्म देशमा विकास हुँदैन । त्यसैले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि भएपनि सविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
राज्यपुनः संरचनाको मुद्दा पनि बाँकी छ, आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशलाई स्वीकार गरेर बस्नुहुन्छ कि एकमधेश प्रदेशका लागि २२ जिल्लाका लागि पनि केही गर्नुहुन्छ ?
–आठ जिल्लाको दुई नम्बर प्रदेश जो मधेशमा पर्छ त्यो हाम्रो आधार क्षेत्र (प्रदेश) हो । राज्य पुनः संरचनाको माग जारी रहेको छ । त्यसका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको छ । २२ वटै जिल्ला मधेश प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो यथावत छ । यो अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशलाई टेकेर मधेशका अरु जिल्ला माग गर्छौ त्यसका लागि संघर्ष गर्छौ ।
स्थानीय तहको चुनावमा मधेशवादी दलको उपस्थिति देखेर एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर एकीकरणसम्मको तयारीमा लागेको छ, यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
–देशको हितमा, जनताको हितमा यदि केही गठबन्धन बनाउँछन् वा पार्टी नै एकीकरण गर्छ भने त्यसलाई म सकारात्मक रुपमा लिन्छु । देशको भलाईका लागि गठबन्धन र एकीकरण राम्रो कुरा हो यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, देशमा हुँदैन, आफ्नो स्वार्थका लागि एकीकरण गरेको हुन्छ वा गठबन्धन बनाएको हुन्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।
वामगठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने एक दलीय शासन शुरु हुन्छ, अधिनायकवाद शुरु हुन्छ भनि चर्चा छ नि तपाईलाई के लाग्छ ?
–सब गलत कुरा हुन् । वामगठबन्धनले त्यस्तो गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । अरु देशको कम्युनिष्ट र नेपालको कम्युनिष्टमा फरक छ । नेपालका कम्युनिष्ट दलहरु पनि लोकतन्त्रका लडेका छन् । विभेद र असमानताका लागि लडेका छन् । मलाई लाग्दैन कि वामगठबन्धनले एक दलीय शासनतिर जान्छ । नेपाल कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट नै होइन, कमाउनिष्ट भएको छ । माओवादी खाओवादी भएको छ । त्यसलै वामगठबन्धनबाट डराउनु पर्दैन । यदि कुनै गल्ती गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसको जवाफ जनताले दिने नै छ । जनता भन्दा ठूलो कोही छैन । जनतासँग कसैले गलत गर्न सक्दैन । जनतालाई कसैले धेरै दिनसम्म धोकामा राख्न सक्दैन ।
वामगठबन्धनको चर्चासँगै राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच पनि एकीकरणको पनि चर्चा भइरहेको छ, त्यसको सम्भावना कति छ ?
–असम्भव केही पनि हुँदैन । तर, त्यसको बारेमा अहिले कुनै छलफल वा चर्चा छैन । भविष्यमा जेपनि हुनसक्छ । त्यसको बारेमा अहिले नै केही भन्न सकिदैन ।
तपाईहरुको यी दुई दलबीचको गठबन्धन चुनावपछि सकिएको हो कि अगामी दिनमा पनि यसैगरि अगाडि बढ्छ ?
–पहिलो कुरा त हामी बीच कुनै गठबन्धन बनेको थिएन । चुनावी तालमेल मात्र भएको थियो । हाम्रो चाहना भनेको अगामी दिनमा गठबन्धन वा मार्चा वा अरु केही बनाएर सँगै अगाडि बढ्ने हो तर ताली एक हातले बज्दैन । उहाँहरुको पक्षबाट यसका लागि कस्तो भूमिका हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । दुई पक्षबीचमा छलफल र वार्ता शुरु भएपछि मात्र त्यो कुरा थाह हुन्छ ।
अन्त्यमा, तपाई सप्तरीबाट चुनाव जित्नुभएको छ, सप्तरीमा के के समस्या देख्नुभएको छ ?
–सप्तरी समस्याको पोको हो । एउटा वा दुईटा समस्या भए पो भन्न सकिन्छ । यहाँ हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । देशकै सबभन्दा पिछडिएको जिल्ला सप्तरी रहेको छ । यहाँ विद्यालय छ तर पढाई हुँदैन, अस्पताल छ तर उपचार हुँदैन, हवाई मैदान छ तर जहाज आउँदैन, नदी छ तर सिँचाई हुँदेन । अर्थात जताततै समस्यै समस्या छ ।
चुनावमा जनताले के अपेक्षा गरेको छ तपाईबाट जो तपाई पूरा गर्नुहुन्छ ?
–जनताले विकास चाहेका छन्, देशको हरेक निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र समानता चाहेका छन् । अधिकारका लागि संघर्ष र विकासका लागि लगानीको आवश्यकता छ । जसको लागि आफ्नो प्रयास निरन्तर रहनेछ ।
(पुस १ गतेको सहारा टाइम्सबाट)